Burmese Introduction for: www.creationism.org
အဓိက ေမးခြန္းမ်ား အဆက္မ်ား EN ေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္ အျမင္မ်ား MP3 ဗီဒီယိုတိပ္ေခြ
က ၁း၁ (Genesis 1:1) " အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
ယော ၁း၁ (John 1:1) " အစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော် မူ၏။ " ဖန်ဆင်းခြင်းတရားအယူအဆသည်လူသားများ၊ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့အစကနဦးမှဖန်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ်လာရကြောင်းကိုလက်ခံ၍ အနတမှမိမိအလိုအလျှောက် သဘာဝအားဖြင့် ဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ငြင်းဆိုထားသည် ။
ကျွန်တော်တို့သည်သေချာစီမံထားသောဂြိလ်တုကြီးတခုပေါ်စီးနှင်းနြှေကသောသူများနှင့်သူကြ သည်။ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းများ နှင့်သေခြင်းတရားများပါ တွေ့ကြုံရသကဲ့သို့လောက၏ အလှအပတရားများ၊မွှေးကြိုင်ခြင်းများ၊မေတ္တာတရားများနှင့်ဂီတများကိုလည်း တွေ့ကြုံ ကြရသည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်္ချာပညာ၊ ဒဿနပညာ၊ အေးမြသောဆောင်းရာသီ၊ ကမ္ဘာ့ဆွဲငြင်အား၊ စိုက်ပျိုးရေး ပညာ များနှင့်ဂြိုလ်တုသွားလာရေးစနစ်တို့သည် သဘာဝအားဖြင် ့ဖြစ်လာနိူင်ပါသလား? ။ ဤအရာ များ အနတမှ မိမိအလိုအလျောက်ဖြစ်လာနိူင်ပါသလား?
ကမ္ဘာကြီး၌ခေတ်အဆက်ဆက်နေထိုင်လာရစဉ်လောကဓာတ်တရားတို့ကိုရှင်းလင်းပြသပေးခဲ့ ကြသောသင်္ချာပညာရှင်တို့၏သေချာသောသက်သေထူချက်များအသိအမှတ်မပြုမိပါလျှင်ခွင့် လွတ်နိုင် စရာအကြောင်းမရှိပါ။ သံသယကင်းရှင်းစွာယုံကြည်ရမည့်အရာများ သာဖြစ်သည်။
လွင််ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃ဝဝဝ ခန့်တွင် ဒါဝိတ်မင်းကြီးက ဤကဲ့သို့ရေးသား ထားခဲ့သည်။ ဆာလံ ကျမ်း ၈း၃-၄ (Psalm 8:3-4) " လက်ညှိုးတော်အလုပ်တည်းဟူသော ကိုယ်တော်၏ မိုဃ်းကောင်းကင်ကို၎င်း၊ ပြင်ဆင်တော်မှုသော လနှင့်ကြယ်များကို၎င်း၊ အကျွနု်ပ်ဆင်ခြင်သော်၊ လူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ် ကိုတော်သည်အောက်မေ့တော်မူရသနည်း။ လူသားသည် အဘယ်သို့ သောသူဖြစ်၍ အကြည့်အရှု ကြွလာတော်မူရသနည်း။ သူ့ကိုကောင်းကင်သမန်တို့အောက်၌ အနည်းငယ်နှိမ့်တော်မူပြီ။ "
မြန်မာစာ ― בורמזי birman бирманский 缅甸语 Birmanisch البورمي birmano बर्मी ― Burmese Myanmar
MENU MY ေဆာင္းပါးမ်ား ကျမ်းစာများ Kids&Teens ရုပ်ရှင်တွေ
Other Web Sites in Burmese (Myanmar) with Creation Science
ခရစ္ယာန္ • Holy Bible • New Testament
burmesebible2008 Myanmar Bible
BURMESE - Dr. Bob Utley
"How to Know God" The Way to God
The Choice Creator Or Liar
The Greatest Story Ever Told This Was Your Life
This Was Your Life The Tycoon
дети Kinder الأطفال ကေလးမ်ား 青少年 Adolescents किशोर Youth
电影 ● Films ● Фильмы ● ဗီဒီယိုတိပ္ေခြ ● أفلام ● Películas ● Videos
Ken Anderson Films ဆင္ လူကေလး
Bible2of 8 - အေရးၾကီးေသာ အိမ္မက္
လူ မွ ေတာင္
— BURMESE, မြန်မာဘာသာ, Burmese, Myanmar, ျမန္မာႏိုင္ငံ — Dialects: Palaw, Myeik, Dawei, Yaw, Intha, Danu
This language is spoken in: Burma (Myanmar); Thailand; Malaysia; Singapore; USA